ဖြစ်ရပ်မှန် - ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဟောင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်
စစ်မှန်သောပုံပြင်: ငါ့အထွ-Boyfriend တစ်ဦးက Porn စွဲခဲ့
“ ငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလေ” ဟုအမ်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ မျက်လုံးပြူးသွားပြီးမျက်ရည်များကျလာသည်။ ငါချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ခဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုကျေနပ်ထက်ပိုခဲ့သညျ။ အမ်အမြဲတမ်းရတဲ့နှင့်ခက်ခဲနေဖို့ပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါသူကကျွန်ုပ်အပေါ်အပြစ်တင်ခဲ့သည်။
အမ်စိုက်ထူဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့သူကရေနွေးငွေ့ကိုဆုံးရှုံးများနှင့်အားလျော့သွား၏သည်အထိသူတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အကြောင်းလမ်းနေဖို့လိမ့်မယ်။ တစ်အော်ဂဇင်ရှိခြင်းတို့အတွက်ကြောင့်ခဏတစ်ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ကြိမ်မှဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရခဲ့သည်။ သူကဆီးဖို့အိမ်သာကအောင်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးကလေးငယ်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်ကျနော်တို့အားပေးစရာလိမ့်မယ်။
ရုပ်ရှင်များတွင် "ဒွန် Jon" ဟုဂျိုးဇက်ဂေါ်ဒွန်-Levitt သူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိန်းမနှင့်လိင်ပျော်မွေ့လို့မရပါဘူး porn ဒါစွဲသောသူတစ်ဦးသည်လူပါဝင်သည်။ ရုံဇာတ်ကောင်ကဲ့သို့ပင်အမ်နေ့တိုင်း porn watched ။ အဖြေဖြစ်မည်အကြောင်းအရာကိုကြောက်ငါတွေးမိဖို့စတင် porn ပြဿနာခဲ့သလား ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင် porn မကြာခဏပုလ်၏ကတိသစ္စာပြုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ porn စွဲ၏စိတ်ကူးအမြဲမှာအကောင်းဆုံးဘာသာရေးညာဘက်တီထွင်တစ်ခုခု nebulous သလိုပဲ။ ငါအရှိဆုံးယောက်ျားတွေအခြိနျမှနျမှကစောင့်ကြည့်ယူဆပေမယ့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တကယ်ကစွဲနိုင်ကြောင်းငါ့ထံသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်အထိပါပဲ။
တစ်ဦးကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုမှာ, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Valerie Voon porn ကြည့်နေစဉ်ကျန်းမာယောက်ျား၏သူတို့နှင့်အတူ Self-ဖော်ပြထား porn စွဲ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီးရီးသို့ပွေးလေ၏။ ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ပုံရိပ်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစဉ်တွင်, compulsive အသုံးပြုသူများက '' ဦးနှောက်, အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းစွဲတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူနှစ်ကြိမ်အဖြစ်တက်ကြွစွာခဲ့ကြသည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအသစ်တခု dopamine ဆူးကိုကြည့်ရှုသူများတစ်ဦးချင်းစီအပိုဆောင်းထိခိုက်ဖို့နေသားတကျဖြစ်လာဖို့ဖြစ်စေတဲ့နေသူများကဖန်တီး porn ကိုကြည့်စောင့်ရှောက်သည့်အခါ။ အချိန်ကျော်, ဦးနှောက်ရဲ့ receptors လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာမှ ပို. ပို. လွန်ကဲအတွေ့အကြုံများများအတွက်လိုအပ်ချက်ကို dopamine မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမိန်းမနှင့်ပုံမှန်လိင်, အလုံအလောက် dopamine သို့မဟုတ်အလုံအလောက်အသစ်အဆန်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်ရန်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်စေတဲ့ပါဘူး - သင်ကမှန်းဆ - erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။
မည်သို့ပင်ဆိုစေတစ်ဦးလက်တွေ့ရှုထောငျ့ကနေညစ်ညမ်းစွဲသေးတဲ့ရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့သိရသည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ထွန်းကအပေါ်သုတေသနပြုပမာဏမှာမအောင်, ဆဲအတော်လေးအသစ်ဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ porn စှဲလမျးသူ, ပြည်သူ့စပီကာများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တိုင်ပင်ဂါများအတွက်သုတေသန၏မရှိခြင်းဆီလျှော်ဖြစ်ပါတယ်ယူဆပါသည်။
“ ကျွန်တော့်ကို [ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းစေ] စေတဲ့ဘယ်စိတ်ဒဏ်ရာအတွေ့အကြုံမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ငါရိုးရိုးလေး [အင်တာနက်ပေါ်မှာ] ကဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်းခံစိတ်ကိုတည်ဆောက်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်၏ဝတ်စုံများသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲလာသည်။ ဒါဟာပုံမှန်ကောင်လေးနှင့်မိန်းကလေးနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါဂိုဏ်း Bang ။ ထိုအခါလည်ချောင်း banging ။ ထိုအခါအဓမ္မပြုကျင့်မှု။ သငျသညျတူညီသောအလုအယက်ရဖို့မြင့်တက်လာရတယ်။ " သူအသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပြည့်ရှိခဲ့သည်။
ရှေးကာလ၌, ယောက်ျားမှကပ်ခဲ့ Playboy နှင့် Penthouse သူတို့ရဲ့ကန်ဘောရရန်။ အခုဆိုရင်ပင် 12 နှစ်အရွယ်အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်သောအရာကို bukkake သိတယ်။ ပို. ပို. လွန်ကဲ porn ၏တကယျ့ smorgasbord ရန်လွယ်ကူ access ကိုဆယ်နှစ်ပေါင်း (အမ်အပါအဝင်) ယောက်ျားနက်ရှိုင်း-လည်ချောင်းနှင့် threesomes အဘို့အတောင်းဆိုမှုများကိုသာမန်တို့တိုင်းအမြိုးသမီးတစအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့် pussy ပါးရိုက်လို့ခံစားသည်ဟုထင်အောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစွဲဖို့မြင့်တက်ပေးခြင်းအဟောင်း-ကျောင်းမှာကတော့ Vivid ဗီဒီယိုမျှမက, ကအမာခံသို့မဟုတ် "gonzo" အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပါပဲ။
GAIL ထမင်းစားခန်း၏စာရေးဆရာ Pornland StopPornCulture.org ကိုတည်ထောင်သူသည်ပြောင်းလဲနေသောညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသဘောမတူနိုင်ပါ။ “ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟောပြောချက်ပေးနေတာပါ။ ပါမောက္ခကကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုပြသတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြသမယ်လို့သတိပေးခဲ့တယ်။ မိန်းမအများစုသည် [hardcore porn] ကိုကြည့်သည့်အခါအများအားဖြင့်အံ့အားသင့်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည် porn သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘာကြောင့်သတိပေးခံရတာလဲလို့သူတို့ကမေးတယ်။ သူတို့အားလုံးအတွက်ပုံမှန်ပုံရသည်။ 'ပုံမှန်' ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမရှိတော့ပါ။ ပုံပြင်လိုင်းမရှိပါ။ ဆူးငြိမ့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောတုန်ခါခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်း၊ ပြီးတော့ ATM စက်ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာသူတို့ဆေးမထည့်ဘဲလိင်တံကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အမျိုးသားသုံးယောက်မှလေးယောက်အထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း။ နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းနှင့် gagging ။ မျက်နှာ၌သူမ၏တံတွေးထွေးခြင်းနှင့်သူမ၏ cunt တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါကပုံမှန် gonzo ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအတိုင်းထားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ ”
ငါဆက်ဆက်ဖိအားခံစားခဲ့ရလေသည်။ "Angelina ချစ်သူများနေ့ [တစ်ဦးညစ်ညမ်းကြယ်] ကိုအကောင်းဆုံးစီးထွက်ရှိခဲ့သည်ပေးသည်," အမ်တစ်ကြိမ်ကဆိုသည်။ "သင်အရမ်းသင်သည်နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းနိုင်ဒါသူမ၏စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။ " သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ကြိုးစားနေငါဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်ငါ့မေးရိုးတခုတခုအပေါ်မှာရောင်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးသောအမ်တဲ့ထိုးနှက်အလုပ်အပ်ပေးတော်မူ၏။ သို့သျောလညျးသူနေဆဲမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမစ္စချစ်သူများနေ့အဖြစ် "စိတ်အားထက်သန်" အဖြစ်မဟုတ်ခဲ့ဘာလို့သူရိုးရှင်းစွာသူမပေးဆောင်တဲ့ခံခဲ့ရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲ, ဘယ်တော့မှနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ သူကကျွန်မသားညှပ်ပေါင်မုများအတွက်အပူတပြင်းတစ်ငတ်ကလေးအခဲ့ကြသည်သော်လည်းသကဲ့သို့ငါ့ကိုကသူ၏လိင်တံသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အမ်လုံးဝတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်မျှတသောဖြစ်စေရန်, ကမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကချစ်ခင်စုံမက်နှင့်ချစ်ခြင်းနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ငါ့ကိုမိုး။ ဒါဟာလိင်မှရောက်လာသောအခါ, ဒါပေမယ့်သူကရုတ်တရက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူတစ်ဦးသို့လှည့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတော်များများဟာဆန္ဒပြခံစားရတယ်။ အမ်ငါကသူ့ကိုမထိခဲ့သည့် tediously တိကျတဲ့လမ်းကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာတွက်ချက်, sexy မပေးသလိုခံစားရတယ်။ အဆိုပါအိတ်အတွင်းရှိတိုင်း session ကိုအမြိုးမြိုး၏အ scorecard ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ၏အ blowjob စုံလင်ခြင်းရှိ၏? ငါအရမ်းသညျမိမိမြည်းကိုလက်ရှိသည်ဟုသင့်သလော ငါအလုံအလောက်ငါ့လက်ကိုလိမ်ခဲ့သလား ငါသည်ငါ့ကို PC ကြွက်သားညှစ်ခဲ့သလား ငါအလုံအလောက်ညည်းတွားခဲ့သလား မေတ္တာရပ်ခံသကဲ့သို့ငါလုပ်ဆောင်မပြုခဲ့ပါလျှင်ငါကွဲပြားခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်, ငါသည်နောက်ဆုံးမှာဘေးဖယ်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်မည်ဖြစ်သည်။
အမ်မတူဘဲ, ယူဆပါသည် porn ကသူ့ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းခဲ့ခံစားခဲ့ရ။ "ငါတကယ်ကြိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးနှင့်ကျွန်တော်လိင်ရှိသည်ဖို့သှားသောအခါငါ၏အဒစ်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ " ယူဆပါသည်ကပြောပါတယ်။ "ငါကအရက်သို့မဟုတ် performance ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ခဲ့သိတယ်။ အွန်လိုင်းအချို့သောသုတေသနလုပ်နေတာပြီးနောက်, ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate ရန်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ခဲယဉ်းမရနိုင်ဘူး။ ဒါဟာအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုဝင်တိုက်; တစ်ဦးမေတ္တာပါသောဆက်ဆံရေးကိုကျော် porn လိုက်စားငါ့ကို၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်အူ၌ငါ့ကိုကန်။ ဒါနဲ့ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ "
ဒါဟာအမှန်တကယ်အမ်ရဲ့ပညာရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းခဲ့လျှင်နေဆဲ, ငါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသေချာအစပျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အမ်တစ်ပါတ်မှုအတွက် porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်မယ်လို့ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
ပြည့်စုံ 180 အလှည့်၌, အမ်ခဲယဉ်းနေပါနှင့် (ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်ရေတွက်) ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းက orgasm နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိအ orgasm မိတ်ကပ်မပါဘဲ Kim Kardashian ၏ရှေ့တော်၌ကဲ့သို့မကြာခဏဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယူဆပါသည်မတူဘဲစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, အမ်နောက်ကျောကသူ့ပုံမှန် porn-စောင့်ကြည့်အချိန်ဇယားဖို့ဖြစ်တယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်း handwringer ခေါ်မှီ, ငါ့ကိုရှင်းလင်းကြကုန်အံ့။ သူက porn watched သို့မဟုတ်မပါလျှင်ဤအချက်ကိုအထိငါလျော့နည်းဂရုစိုက်နိုင်တယ်။ ပယ်ရဖို့ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရံဖန်ရံခါ - အရှိဆုံးမိန်းမကဲ့သို့ - ငါမတိုင်မီ porn စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်မ လိုအပ်ချက် စောင့်ကြည့်ဖို့ ပြီးတော့နေ့တိုင်းလူဆိုးဂိုဏ်းခွဲတာကိုငါကြည့်နေတာတော့သေချာတယ်။ သောက်သောသူတိုင်းအရက်မဖြစ်သကဲ့သို့ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုသူတိုင်းမစွဲလမ်းကြပါ။ ပျော်ရွှင်မှုကိုမှီခိုခြင်းသို့ပြောင်းလဲသောအခါပြinနာရှိနေသည်။ Deem ထောက်ပြသည့်အတိုင်း“ သင်၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ခြင်းထက်လိင်ကိစ္စအပျက်သဘောဆောင်သောအရာမရှိ။ ” အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူအမျိုးသားမျိုးဆက်သစ်များသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကမရှိခဲ့သည့်စွဲလမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ porn သည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပို၍ တူလာပြီးဘောလုံးနှင့်ကွင်းဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်။
"Porn အဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူး!" အပြုအမူသုတေသီ Andrea Kuszewski ကပြောပါတယ်။ "ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားအများကြီးအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးပေါ်ချွတ်ရ သေဆုံး သူတို့ကိုပါးစပ်လိင်ပေးဖို့, သူတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်သူတို့ပဲသူတို့ကပယ်မိမိတို့အဝတ်ကို rip နိုင်အောင်တံခါးနားမှာသူတို့ကိုကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတနေ့လုံးသောဝဒေနာအတွက်န်းကျင် writhing ဖြစ်ကြောင်း, ကလုပ်နေတာစဉ်အပေါ်လှည့်, သူတို့သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံအခါတိုင်း orgasm နေကြတယ် သူတို့ပဲဒါကြောင့်သူရဲများနှင့်တွန်းလှန်ကြောင့်။ ဒါကတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကဒီလိင်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ, ဒီဆက်ဆံရေးကဲ့သို့ဖြစ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုဖြစ်ပါသည်, ဤ sexy သည်အဘယ်အရာကြောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်သောကြောင့်, porn မှ '' စွဲ '' ခံရပြဿနာရှိသည်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ဒါကပဲကြိတ်ဆုံစိတ်ပျက်၏ပြေးပါတယ်။ "
ငါခံစားချက်သိတယ် အမ်သည်ကျွန်ုပ်၏“ မှန်မှန်ကန်ကန်” ဖျော်ဖြေခြင်းအပေါ်စွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်“ ထို pussy ပေါ်လာသည်” မဟုတ်ကြောင်းနှင့်သူ၏လက်သည်အမြဲတမ်းကောင်းသည်ဟုညည်းညူခဲ့သည်။ သူကဘာလိုချင်လဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ ငါသူ့ကိုခွဲနေတယ်၊ ​​တစ်ညလုံးသူ့ကိုစီးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့လိင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကိုသုံးတာလားဆိုတာတော့အရေးမကြီးဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သူစိတ်ဝင်စားခဲ့သည့်အရာများ (ဆီးကြိတ်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်နို့ထွက်ခြင်း) တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုသူကစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ငါဆပ်ကပ်တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ခံစားရရန်စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အမ်သည်အပြည့်အဝလှည့်စားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အတွက်နာကျင်စွာသိမြင်လာခဲ့သည်။ သူသည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်မှန်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
ဝိရောဓိ, အမ်နဲ့ကျွန်မသူကမလုပ်ပေးနိုင်တော့တဲ့ဂန္ porn ပြောင်းရွှေ့ခြင်း (ol '' ပုလဲလည်ဆွဲ) ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အခါ။ "မင်းကိုချစ်တယ်။ ငါမနိုင်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ ငါမက်ဒေါနားနှင့်ပြည်တန်ဆာမများအကြားအချို့မှုန်ဝါးအာကာသအကြားညပ်မပြုခဲ့ပါလျှင်ငါလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုနှင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုသော်လည်းကြောင့်သလိုပဲ။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ငါ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုမိမိအစွဲတစ်ခုပြန်ထိုင်ခုံယူပြီးခဲ့ကြသည်။ ငါသူ့ကိုလက်ညှိုးကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ငါကပို foreplay ချင်တယ်။ ငါကစားစရာကြိုက်တယ်။ ငါလျော့နည်းတွက်ချက်မှုနှင့်ပိုပြီးရိုင်းစိတ်အားထက်သန်ချင်တယ်။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူ့ကိုငါတကယ်ခက်ခဲရှိနေဆဲ, သူမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံရုံ 10 မိနစ်အကြာတွင်ပြုသကဲ့သို့အသက်ရှုထဲက run မရချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုသူစောင့်ကြည့်ကြ porn ၌ရှိသကဲ့သို့, လိင်အပေါင်းတို့သည်သူ၏အပျြောအပါးနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်ချွတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံအလယ်တန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အမ်ရှက်ခံစားရရန်အစခဲ့ပါတယ်။ "ငါသည်သင်တို့အားငါ fuck ဆိုတဲ့မနိုင်စဉ်းစားရန်အစပေါ့" ဟုသူကဝမ်းနည်းစွာဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိဂုံးကိုမလွှဲမရှောင်ခဲ့ကြောင်းတစျခုဖွစျသညျ။ သူကအမှန်တကယ်သူ, ရေရှည်မှာတကပြဿနာပြုမူသောအမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအားမိမိစွဲလမ်းမဟုတ်ခဲ့တွေ့မြင်နိုင်ခြင်းပျော်ရွှင်ဖြစ် porn, threesomes, နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံလိုအပ်ယုံကြည်သည်။ ငါသည် ချစ်. , ဒါပေမယ့်ငါဝေဖန်မှုများငြီးငွေ့ခဲ့နဲ့ကျွန်မချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်ထက် gangbanging အကြောင်းပိုမိုသိသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူငါ့အသက်ကို၏ကျန်သုံးဖြုန်းချင်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တစ်ဦးသောက်စရာတက်သည်ကိုတွေ့သောအခါလကြာပြီးနောက်သူသည်ငါ့ကိုတစ်ခုခုဝန်ခံခဲ့သည်။ "ငါတို့သည်သင်တို့၏မီးဖိုချောင်ထဲမှာချက်ပြုတ်ခဲ့ကြရသောအခါငါ့အသက်ကို၏အပျော်ရွှင်ဆုံးအခိုက်သင်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ " ဟုသူကသူ၏မျက်နှာကိုအပေါ်တစ်ဦးယူခြင်းတည်းဟူသောကြည့်နှင့်အတူကဆိုသည်။ ဒါဟာသူ့အပျော်ရွှင်ဆုံးအခိုက်လိင်ပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့မထင်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူကမမွငျနိုငျရုံလည်းမကောင်းတဲ့ပါပဲ။
FRISKY ON ORIGINAL POST လင့်ထားသည်
အတူတူစာရေးဆရာအားဖြင့်ဤအကြောင်းကိုဒုတိယဆောင်းပါး Link ကို
YBOP မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ။ ထူးဆန်းသောမေးခွန်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏတင်လေ့ရှိသည်။ t.co/eNZ0V0rTXo
@ကွေးနနျးစကျ ဒီမှာဘီဘီစီ podcast စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု t.co/NUGPYfP83f